FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA POMCHI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pomchi
Alika mitambatra Pomeranian / Chihuahua mifangaro
Pomchis, Rei amin'ny 1 taona ary Twinkie amin'ny 5 taona— 'Rei (ankavia indrindra), ary i Twinkie raibeny. Twinkie dia taranaka Pomchi voalohany avy amin'ny tohodrano Chihuahua lava volo ary raim-pianakaviana Pomeranian, saingy saika toa Pom madio izy. Tena hyper izy ary mihetsika toy ny alika kely. Izy no tena mpandehandeha fa tena sariaka izy ary tia ny ho ivon'ny fiheverana. Rei dia taranaka fahatelo Pomchi eo anilan-drainy. Izy dia avy amin'ny razana Pomchi 50/50 an'ny taranaka faharoa ary avy amin'ny reny Chihuahua 3/4 sy 1/4 Pomeranian. '
Ny alika Pomchi dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pomeranian ary ny Chihuahua . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Pomchi Standard - nankatoavin'ny Pomchi Club of America Fisehoana ankapobeny ny 6/18/1998: alika kely fohy miampy endrika mahafinaritra i Pomchi ary feno endrika sy mailaka ary manan-tsaina. Milanja: 5 ka hatramin'ny 12 pounds. Fizarana: fohy ny vatana miaraka amina vehivavy avela ho lava kokoa noho ny lahy. Ny loha dia volo boribory. Teny: Fanairana, manan-tsaina. Maso: Boribory, tsy mivohitra, tsy atao malalaka na mifanakaiky loatra. P pigment mainty manodidina ny maso afa-tsy ny fandokoan-tena avela alika volontany, manga na miloko maivana. Maizina ny masony afa-tsy ny fandokoana maivana kokoa avela ahena. Sofina: habe antonony, sofina mijoro tsara, tazonina mahitsy rehefa mailo fa mety entina miverina any am-pialana voly. Muzzle: fijanonana somary fohy, somary maranitra ary voafaritra. Mahia ny takolaka sy ny valanoranony. Orona: mainty ny pigmentation afa-tsy ny fandokoana tena avela amin'ny manga na volontany, fandokoana nofo avela amin'ny fotsy sy menaka maivana. Manaikitra: Haavo na hety. Tenda: miverina miverina amin'ny soroka ny base, tsy fohy loatra mba hahasoavana. Topline: Haavo. Vatana: misy tadiny tsara, boribory, tsy barika mihitsy. Tail: lava somary lava, entina fisaka na anaty tadivavarana any an-damosina, miaraka amin'ny tendrony mikitika ny lamosina fotsiny, tsy tafiditra eo anelanelan'ny tongotra mihitsy. Soroka: miondrika mankany amin'ny ambaratonga miverina amin'ny alàlan'ny fametahana ampy hitondrana tsara ny vozona, tsy hidina na hidina ambany mihitsy. Forelegs: mahitsy sy mifanila. Pasterns: Pomchi mijoro tsara amin'ny rantsantongotra fa tsy midina amin'ny pastern mihitsy. Mety esorina ny lalàm-panala eo aloha. Tongotra: tongotra kely sy madity. Indraindray: hozatra, miaraka amin'ny bainga mifandraika amin'ny tany, misaraka tsara, avela hilatsaka, mafy orina ary matanjaka. Ny tongotra dia toy ny eo aloha. Matetika esorina ny lalàm-panala. Palitao: mety ho sosotra roa na tokana. Ny palitao ivelany dia tokony ho feno, malefaka endrika ary manjelanjelatra miaraka amina mpiambina lava sy lava. Palitao napetraka tsara mihoatra ny vatana amin'ny ruff amin'ny tendany tiany, ary scantier amin'ny loha sy sofina. Volo amin'ny rambony be volo sy volony. Navela ny undercoat. Ny volom-borona avela amin'ny tongotra sy sofina. Fanetezana: avela manodidina ny tongotra sy ny nosy ho an'ny fahadiovana ihany. Loko: Ny loko rehetra, ao anatin'izany ny solid, parti, merle, sable dia azo ekena ihany koa. Gait: Hetsika amin'ny feo, malefaka ary maimaim-poana. Ny topline dia tokony hijanona ho mafy orina sy ny ambaratonga miverina rehefa mihetsika ny alika.
Registra ny famolavolana endrika = Chiranian
Mpanoratra International Canine Registry®= Pomchi
Sugar ny Pomchi amin'ny 4 volana
'Mowgli dia Pomchi kely kely efa-taona izay tsy milanja afa-tsy efatra kilao. Zaza tena marani-tsaina sy simba izy. Nampiofana ny tompony hanosotra ny kibony izy rehefa mihodina eo an-damosiny. Mahafatifaty tokoa izy miaraka amin'ny biscuits alika. Manana rahavavy sy zoky lahy lehibe izy (a Golden Retriever ary a Jackshund ) ary hitondra manodidina sy hiambina biskuit alika mandritra ny ora maro izy alohan'ny hanapahany hevitra ny hihinana azy. Mahafinaritra azy ny mijery rehefa mifanerasera amin'ny alikanay hafa izy. Izy dia milalao miaraka amin'i Jackshund 15 kilao be dia be ary hijery sy hivoaka rehefa milalao i Jackshund sy Golden Retriever. Tena mientanentana be foana izy rehefa avoakako ny harness satria fantany fa handeha ho any isika. Ny fitsangatsanganana dia misy fitsaboana matetika toy ny akoran'akoho. Alika mamy sy be fitiavana izy ary faly foana mahita ny tompony isaky ny avy miasa izahay. Na efa tsy teo aminy minitra vitsy akory. '
Cameo the Pomchi feno 18 volana— 'Mihaona amin'i Cameo, Pomchi (fifangaroana Pomeranian / Chihuahua). 1 1/2 taona eo amin'ity sary ity izy, vao nifoha torimaso ary mbola somary rendremana. Cameo dia alika kely mahafinaritra sy sariaka miaraka amina endrika amboahaolo izay mazàna mahatonga azy ho toy ny mitsiky. Heveriko fa izy! Manana toetra mampihomehy izy ary mamela ahy hitsiky foana. Tian'i Camee ny kilalao manafintohina azy ary tiany koa ny milalao amin'ny alika rahalahiny Tug the Jug . Mpankafy izy ary mpikambana sarobidy amin'ny fianakavianay. '
'Ity ny sarin'ny alikako Munchkin. Izy dia mifangaro Chi-Pom. Ny dadany dia Chihuahua lava volo, ary ny reniny dia Pomeranian. Milanja 15 pounds eo ho eo izy, izay tsy mahazatra, saingy manana ny mampiavaka azy ny karazany 2. Tena izy mafy loha ary mahaleo tena. '
Mocha the Pomchi alika amin'ny 8 herinandro - ny reniny dia Pomeranian ary ny dadany dia Chihuahua .
Taco mandritra ny 2 taona
Timbit the Pomchi amin'ny faha-7 volana misy baolina ao am-bavany
I Micki dia ny ray aman-dreniny dia Pom / Chi mixes. Izy no fako tamin'ny fako, milanja 1/3 pounds eo amin'ny mari-pahaizana vetivety amin'ny 5 herinandro. Amin'ny 2 taona dia milanja 6,1 pounds izy. Tsy mivoraka izy na tsy mirona (mitroka fotsiny rehefa faly) ary izy no alika mamy sy be fitiavana indrindra fantatro hatrizay!
'Timbit dia lakroa Pomeranian / Chihuahua. Noraisinay i Timbit avy tao amin'ny foibe famonjena an'i Petland fony izy 6 volana. Nisaraka ny tompony teo aloha ary samy tsy te hanana andraikitra amin'ny fiompiana alika ka naverin'izy ireo ilay zazalahy kely. Rehefa nahita an'i Timbit izahay dia fitiavana izany tamin'ny voalohany. 1 taona izy, 10 volana izao (16 Aogositra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany) ary milanja 8 pounds.
'Timbit dia mpianatra haingana dia haingana - izy dia voatery niasa an-trano tao anatin'ny iray herinandro teo (na dia efa 6 volana aza izy tamin'izahay naka azy). Mianatra fika haingana izy ary tia milalao ary koa ny fampiofanana azy. Azoko antoka fa hihevitra ny hafainganam-pandehany ho fananany tsara indrindra izy. Mety ho kely izy fa nihoatra ny mpiandry ondry alemanina imbetsaka. Matetika izahay no maka an'i Timbit a MANDEHANA indray mandeha isan'andro ary hazakazaka tsara any an-tokontany isan'andro. Ankafiziny ny mandeha fa tena tia mihazakazaka haingana be.
'Mitomany amin'ny vahiny sy alika hafa i Timbit, saingy milamina haingana tampoka rehefa fantany fa tsy faly amin'izany fihetsika izany isika. Tena tsara fitondran-tena izy manodidina ny zazakely sy ny ankizy kely ary avelany izy ireo hanafika azy sy hanenjika azy manodidina.
'Cesar Millan dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fifandraisanay tamin'ny alikanay. Ny fijerena ny Whisperer alika, ary ny famakiana ny 'Be the Pack Leader' dia tena nanome antsika fahitana ny antony itondran'ny alika ny fomba fanaony sy ny fanovana fihetsika ratsy na tsy tiana. Alohan'ny nijerena ilay Dog Whisperer sy namaky ny bokin'i Cesar Timbit dia alika be fanahiana sy manjaka. Nampiasainay ny paikadin'i Cesar hampahafantarana an'i Timbit fa tsy izy no mpitondra entana, ary nihena tanteraka ny fitondran-tenany mahery setra. '
Coco Chanel Pomeranian / Chihuahua dia afangaro taorian'ny nahazoany azy tokana fako alika kely . '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Pomchi
Sary Pomchi 1
Sary Pomchi 2
Sary Pomchi 3
ohatrinona ny vidin'ny alika c section
Jack Russell sy Corgi mix
spaniel Charles mpanjaka sy ny bichon frize Mix
alika milanja 20 pounds
briffs griffon sy chihuahua mifangaro